के आमा निर्दयी हुन्छिन् ? यो घटनाले सोच्न बाध्य बनाउनेछ - TV Annapurna
आमा ! सन्तानलाई सबैभन्दा बढी माया गर्ने नाता हो । सन्तानलाई सामान्य केही हुँदा पनि सबैभन्दा बढी पीडा आमालाई नै हुन्छ होला । किनकि सन्तान जन्माउँदाको पीडा आमाले १० महिनासम्म भोगेकी हुन्छिन् । आमालाई दयाको खानी मानिन्छ । के आमा पनि निर्दयी हुन्छिन् ? धेरैको जवाफ हुनसक्छ हुँदैनन् । तर यो घटनाले तपाईँलाई सोच्न बाध्य बनाउनेछ ।
ताप्लेजुङको पाथीभरा याङबरक वडा नम्बर २ की एक आमा’ ले आफ्नै दुई छोरीलाई शौचालयमा लगेर निर्मम हत्या गरेकी छिन् । कच्ची शौचालयभित्र दिशामा डुबाइएकी एक छोरीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ भने अर्कीको शव सेफ्टी ट्याङ्कीमा फेला परेको छ ।
छोरीको हत्यापछि फरार रहेकी कमला एक वर्षे जुम्ल्याहा छोरीका साथ माइतीघरमा बस्दै आएकी थिइन् ।
कमलाकी आमाका अनुसार दुई छोरी काखी च्यापेर उनी घरबाट निस्किएकी थिइन् । तर, हिजो शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्कीमा बच्चा रोएको सुनेपछि उनीहरूले छिमेकीलाई खबर गरे ।
त्यहाँ खाल्डे चर्पी थियो । स्थानीयले त्यही चर्पीबाट एक बच्चीलाई जीवितै उद्धार गरे । मलमूत्रले लत्पतिएको अवस्थामा उद्धार गरिएकी शिशुलाई स्थानीयले एम्बुलेन्समा हालेर बिर्तामोड र्पुयाए पनि उनी वीवित रहन सकिनन् । बुधवार उनको निधन भयो । अर्की बालिकाको भने सेफ्टी ट्याङ्कीमा नै मृत्यु भएको थियो ।
आफ्ना दुई शिशुलाई हत्या गरेर कमला कता गइन् भन्ने खुलेको छैन । प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको छ ।